COVID-19 လူနာတွေကုနေတဲ့ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က မြန်မာဆရာဝန်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ငါးသိန်းခွဲကျော်နဲ့ သေဆုံးသူအရေအတွက် နှစ်သောင်းကျော် ရှိလာနေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အမျိုးမျိုးရှိနေတာပါ။ တချို့မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရပေမယ့် အခြေအနေကောင်းနေပြီး၊ တချို့ကတော့ အခြေအနေ ဆိုးရွားလာတာကြောင့် ဆေးရုံတင် ကုသရတဲ့အဆင့် ရောက်လာတာမျိုးရှိသလို၊ ကောင်းနေတယ်လို့ ထင်ပေမယ့် ရုတ်တရက် အခြေအနေဆိုးပြီး သေဆုံးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ လည်းရှိပါတယ်။
အခြေအနေ မဆိုးတဲ့ ကိုဗစ်လူနာတွေ ကုသပေးရတဲ့ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Jackson Memorial ဆေးရုံက အထွေထွေအထူးကု ဒေါက်တာ စိုးပိုင်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မ အင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒေါက်တာ စိုးပိုင်။ ။ COVID Suspect ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ positive result မစောင့်တော့ဘူး။ Suspect ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့ သပ်သပ် ခွဲထားတဲ့ အဆောင်ရှိတယ်။ အဲဒီအဆောင်က အခန်းတွေက Negative pressure ဖြစ်ရတယ်။ Negative pressure ဆိုတာက အထဲက လေကို အပြင်စုပ်ထုတ်ပြီးတော့ စိတ်ချရတဲ့နေရာကို သွားလွှတ်ရတာပေါ့။ တံခါးတွေ ပွင့်သွားတာတို့ ၊ အခန်းမလုံတာတို့ဆိုရင် အထဲက လေက Hallway ထဲကို မထွက်လာအောင်လို့ စုပ်ထုတ်တဲ့ဟာ ရှိရတယ်။ Negative pressure ဖြစ်ရတယ်။ တဆောင်လုံးက သပ်သပ်ဆီ ဖြစ်ရတယ်။ အထဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်း အကုန်အပြည့်ဝတ်ရတယ်။ တကိုယ်လုံး ၊ ခေါင်းရယ် ဆံပင်တွေလည်း အုပ်ရတယ်။ ဖိနပ် cover လုပ်ရတယ် ၊ မျက်နှာဆိုရင်လည်း မျက်မှန်ရှိရင် ရှိ၊ မရှိဘူးဆိုရင် shield လုပ်ရတယ်။ N-95 ကတော့ မရှိလို့ မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် ၊ အဲဒါကို တပ်ရတယ်။ လူတယောက်ဆိုရင် အသက် ၅၀ လောက်ပဲ ရှိသေးတယ် ကျနော် ရောက်လာတော့ ချောင်းဆိုးတယ်၊ သူ့မိန်းမလည်း ချောင်းဆိုးနေတယ်။ လာတုန်းကတော့ အကောင်းပဲ သိပ်မဆိုးဘူး အောက်ဆီဂျင် နည်းနည်းလေးပဲ လိုတယ်၊ နှာခေါင်းပိုက်လေးနဲ့ တပ်ထားတယ်။X-ray မှာတော့ ပြတော့ ပြနေတယ် ၊ result ကတော့ မလာဘူး Suspect ကတော့ ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ တရက်အတွင်းမှာ ရုတ်တရက် ဆိုးလာတယ် ညနေလောက်မှာ တော်တော်ကြီးအမောဖောက်တယ်၊ အောက်ဆီဂျင် အရမ်းလိုနေတယ်။ သူက နောက်နေ့ကျတော့ လုံးဝ ventilator တင်ရလောက်အောင်ကို ဖြစ်သွားတယ်။ X-ray နောက်နေ့မှာ ပြန်ရိုက်လိုက်တော့ သူလာတုန်းကနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ တော်တော်ဆိုးသွားတယ်။ လူတိုင်းတော့ အဲလိုမဖြစ်ဘူး ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်တာပေါ့လေ။ ကိုယ်ခံအားမကောင်းရင် မြန်တာပေါ့ ၊ ဆိုးပြီဆိုရင် အရမ်းမြန်လေ့ရှိတယ်။ တချို့ကျတော့ သက်သာပြီးတော့ အိမ်ပြန်သွားတာလည်း ရှိတယ်။ ချောင်းဆိုးတာတို့၊ ဖျားတာတို့ဆိုရင် အနီးဆုံး ER မှာသွားစစ်လိုက်ပါ။ ER မှာဆိုရင် COVID တင်မကဘူး X-ray တွေပါ ရိုက်လိုက်သေးတယ် ၊ တခါတလေတော့ လူက ကောင်းပေမယ့် X-ray က ပြနေတယ်။ အဲဒါက Virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နမိုးနီးယားပုံစံတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ အဲဒါမျိုးဆိုရင် ဆေးရုံမှာ နေလိုက်တာကောင်းတယ်။
အင်ကြင်းနိုင်။. ။ ပြန်ကောင်းသွားတဲ့ လူနာတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ကုသပေးတာလဲရှင့်။
ဒေါက်တာ စိုးပိုင်။. ။တချို့ကျတော့လည်း တော်တော်လေး သက်သာလာတယ်။ ၅ ရက် ၆ ရက်လောက် အောက်ဆီဂျင် မလိုဘူးဆိုရင် ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အိမ်မှာ စောင့်ကြည့်နိုင်တယ် အဖျားလည်းမရှိဘူး၊ Stroke လည်းမရှိဘူး၊ X-ray တွေဘာတွေ ရိုက်လိုက်လို့ သက်သာတယ် ဆိုရင် အိမ်ပြန်ပြီးတော့ quarantine လုပ်ခိုင်းတယ်၊ မှာတော့ မှာရတာပေါ့နော် တခုခုဖြစ်ရင် ချက်ချင်းပြန်လာဖို့ ဥပမာ- အဖျားတွေဘာတွေ တက်တယ်ဆိုရင် ဆေးရုံကို ချက်ချင်းပြန်လာဖို့ အဲလိုမှာပြီးတော့ discharge လုပ်လို့ရတယ်။ Positive တောင်မှ Symptom မရှိဘူး သက်သာတယ်ဆိုရင် ပြန်လွှတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စောင့်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်။ ဒီမှာက ကျနော်တို့ chloroquine သုံးတယ်။ ရောဂါက positive လည်းရှိတယ်။ X-ray ကလည်း ပြနေတယ်၊ symptom တွေလည်း ရှိတယ် အောက်ဆီဂျင် များများလိုတယ်ဆိုရင် chloroquine နဲ့ ပြီးတယ်။ တချို့ကတော့ chloroquine တောင်မလိုဘူး ၊ positiveဖြစ်ပေမယ့် လူကောင်းနီးပါးရှိတယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းပဲ မှာလိုက်တာရှိတယ်။ တချို့တော့ ဆေးရုံမှာ chloroquine နဲ့ ကုတယ် အမျိုးမျိုးပဲ ၊ ကိုယ်ခံအားပေါ်လည်း မူတည်တယ်၊ အသက်အပေါ်လည်း မူတည်တယ်။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ အဲဒီလို ငှက်ဖျားဆေး chloroquine ကို လူနာတွေကို ပေးတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လို အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ပြီး ပေးလဲရှင့်။
ဒေါက်တာ စိုးပိုင်။ ။ အဓိက သတိထားရမှာက Heart ပဲ ၊ heart diseases ရှိတယ်ဆိုရင် နည်းနည်း သတိထားရတယ်။ EKG လည်း နေ့တိုင်းလိုလို check လုပ်ရတယ်။ Wave တွေကြည့်ရတယ် ပြောင်းသွားလား ဆိုတာကြည့်ရတယ်။ QT လို့ ခေါ်တယ် EKG မှာ Wave length လေးတခုရှိတယ် အဲဒါကို monitor လုပ်ရတာပေါ့နော်။ အဲဒါ တက်လာပြီဆိုရင် ရပ်ပြီးတော့ နောက်တခုကို ပြောင်း ၊ အဓိကတော့ Heart monitor လုပ်ရတာပေါ့နော်။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ ဖလော်ရီဒါမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဖို့ လူတွေအိမ်မှာပဲ နေဖို့ ညွန်ကြားထားတဲ့ကာလ ဘယ်လောက်ထိလဲ။ အခုလို အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကရော လုံလောက်မှုရှိတယ်လို့ မြင်ပါလား။
ဒေါက်တာ စိုးပိုင်။ ။ အခုအထိတော့ မပြောသေးဘူး ။ မေလလောက်အထိတော့ မှန်းထားတာပေါ့နော်။ Suggestion လောက်ပါပဲ ဘာမှ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်မရှိဘူး၊ Curfew လိုမျိုးတော့မရှိဘူး သွားလာနေတာပဲ။ လူအုပ်တော့ မရှိတော့ဘူး မလိုအပ်တဲ့ လူစုလူဝေးကတော့ အဲဒါတော့ ပေးမလုပ်ဘူး။ ဥပမာ- Church တွေဘာတွေ မသွားရဘူး ၊ လူမလိုအပ်ပဲနဲ့ မစုရဘူး။ အဲလိုတော့ရှိတယ် ခွင့်မပြုဘူး။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ အခုလို အစိုးရတို့ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေ လုပ်နေတာကရော လုံလောက်တယ်လို့ မြင်ပါသလား။
ဒေါက်တာ စိုးပိုင်။ ။အခုအထိကတော့ patient rate တွေကတော့ တက်နေတာပဲ၊ ကျနေ်ာ နေ့တိုင်းသတင်းကြည့်နေတဲ့အထဲမှာ positive case တွေလည်း တက်တက်လာနေတာပဲ။ နည်းနည်းလေးတော့ အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေထက်တော့ slowdown ဖြစ်လာတယ်လို့ ထင်တယ်။ အစိုးရလုပ်တာကတော့ ပြောနေတာကတော့ နောက်ကျတယ်လို့ ပြောနေတယ် ။ ဆိုတော့ ဖိဖိစည်းစည်း ဒါကို ကိုင်တွယ် တားဆီးတာ နည်းနည်းနောက်ကျတယ်။”
Jackson Memorial ဆေးရုံက အထွေထွေ အထူးကု ဒေါက်တာစိုးပိုင်ပြောသွားတာပါ။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာ-အမေရိကန် တချို့ရှိနေပါတယ်။
COVID-19 လူနာတှေ ကုနတေဲ့ ဖလျောရီဒါပွညျနယျက မွနျမာဆရာဝနျရဲ့ အတှအေ့ကွုံ
COVID-19 ရောဂါကူးစကျခံရသူ ငါးသိနျးခှဲကြျောနဲ့ သဆေုံးသူအရအေတှကျ နှဈသောငျးကြျော ရှိလာနတေဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ဗိုငျးရပျဈပိုးကူးစကျခံရသူတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနေ အမြိုးမြိုးရှိနတောပါ။ တခြို့မှာ ဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံထားရပမေယျ့ အခွအေနကေောငျးနပွေီး၊ တခြို့ကတော့ အခွအေနေ ဆိုးရှားလာတာကွောငျ့ ဆေးရုံတငျ ကုသရတဲ့အဆငျ့ ရောကျလာတာမြိုးရှိသလို၊ ကောငျးနတေယျလို့ ထငျပမေယျ့ ရုတျတရကျ အခွအေနဆေိုးပွီး သဆေုံးတဲ့ အဖွဈအပကျြတှေ လညျးရှိပါတယျ။
အခွအေနေ မဆိုးတဲ့ ကိုဗဈလူနာတှေ ကုသပေးရတဲ့ ဖလျောရီဒါပွညျနယျ Jackson Memorial ဆေးရုံက အထှထှေအေထူးကု ဒေါကျတာ စိုးပိုငျရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို မ အငျကွငျးနိုငျက ဆကျသှယျ မေးမွနျးထားပါတယျ။
ဒေါကျတာ စိုးပိုငျ။ ။ COVID Suspect ဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ positive result မစောငျ့တော့ဘူး။ Suspect ဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ သူတို့ သပျသပျ ခှဲထားတဲ့ အဆောငျရှိတယျ။ အဲဒီအဆောငျက အခနျးတှကေ Negative pressure ဖွဈရတယျ။ Negative pressure ဆိုတာက အထဲက လကေို အပွငျစုပျထုတျပွီးတော့ စိတျခရြတဲ့နရောကို သှားလှတျရတာပေါ့။ တံခါးတှေ ပှငျ့သှားတာတို့ ၊ အခနျးမလုံတာတို့ဆိုရငျ အထဲက လကေ Hallway ထဲကို မထှကျလာအောငျလို့ စုပျထုတျတဲ့ဟာ ရှိရတယျ။ Negative pressure ဖွဈရတယျ။ တဆောငျလုံးက သပျသပျဆီ ဖွဈရတယျ။ အထဲဝငျမယျဆိုရငျလညျး အကုနျအပွညျ့ဝတျရတယျ။ တကိုယျလုံး ၊ ခေါငျးရယျ ဆံပငျတှလေညျး အုပျရတယျ။ ဖိနပျ cover လုပျရတယျ ၊ မကျြနှာဆိုရငျလညျး မကျြမှနျရှိရငျ ရှိ၊ မရှိဘူးဆိုရငျ shield လုပျရတယျ။ N-95 ကတော့ မရှိလို့ မဖွဈဘူးပေါ့နျော ၊ အဲဒါကို တပျရတယျ။ လူတယောကျဆိုရငျ အသကျ ၅၀ လောကျပဲ ရှိသေးတယျ ကနြျော ရောကျလာတော့ ခြောငျးဆိုးတယျ၊ သူ့မိနျးမလညျး ခြောငျးဆိုးနတေယျ။ လာတုနျးကတော့ အကောငျးပဲ သိပျမဆိုးဘူး အောကျဆီဂငျြ နညျးနညျးလေးပဲ လိုတယျ၊ နှာခေါငျးပိုကျလေးနဲ့ တပျထားတယျ။X-ray မှာတော့ ပွတော့ ပွနတေယျ ၊ result ကတော့ မလာဘူး Suspect ကတော့ ဖွဈနတောပေါ့နျော။ တရကျအတှငျးမှာ ရုတျတရကျ ဆိုးလာတယျ ညနလေောကျမှာ တျောတျောကွီးအမောဖောကျတယျ၊ အောကျဆီဂငျြ အရမျးလိုနတေယျ။ သူက နောကျနကေ့တြော့ လုံးဝ ventilator တငျရလောကျအောငျကို ဖွဈသှားတယျ။ X-ray နောကျနမှေ့ာ ပွနျရိုကျလိုကျတော့ သူလာတုနျးကနဲ့ ယှဉျကွညျ့လိုကျတော့ ၂၄ နာရီအတှငျးမှာ တျောတျောဆိုးသှားတယျ။ လူတိုငျးတော့ အဲလိုမဖွဈဘူး ဖွဈခငျြမှ ဖွဈတာပေါ့လေ။ ကိုယျခံအားမကောငျးရငျ မွနျတာပေါ့ ၊ ဆိုးပွီဆိုရငျ အရမျးမွနျလရှေိ့တယျ။ တခြို့ကတြော့ သကျသာပွီးတော့ အိမျပွနျသှားတာလညျး ရှိတယျ။ ခြောငျးဆိုးတာတို့၊ ဖြားတာတို့ဆိုရငျ အနီးဆုံး ER မှာသှားစဈလိုကျပါ။ ER မှာဆိုရငျ COVID တငျမကဘူး X-ray တှပေါ ရိုကျလိုကျသေးတယျ ၊ တခါတလတေော့ လူက ကောငျးပမေယျ့ X-ray က ပွနတေယျ။ အဲဒါက Virus ကွောငျ့ဖွဈတဲ့ နမိုးနီးယားပုံစံတှဖွေဈနတောပေါ့နျော။ အဲဒါမြိုးဆိုရငျ ဆေးရုံမှာ နလေိုကျတာကောငျးတယျ။
အငျကွငျးနိုငျ။ ။ ပွနျကောငျးသှားတဲ့ လူနာတှကေို ဘယျလိုမြိုး ကုသပေးတာလဲရှငျ့။
ဒေါကျတာ စိုးပိုငျ။ ။တခြို့ကတြော့လညျး တျောတျောလေး သကျသာလာတယျ။ ၅ ရကျ ၆ ရကျလောကျ အောကျဆီဂငျြ မလိုဘူးဆိုရငျ ၊ ကိုယျ့ကိုကိုယျ အိမျမှာ စောငျ့ကွညျ့နိုငျတယျ အဖြားလညျးမရှိဘူး၊ Stroke လညျးမရှိဘူး၊ X-ray တှဘောတှေ ရိုကျလိုကျလို့ သကျသာတယျ ဆိုရငျ အိမျပွနျပွီးတော့ quarantine လုပျခိုငျးတယျ၊ မှာတော့ မှာရတာပေါ့နျော တခုခုဖွဈရငျ ခကျြခငျြးပွနျလာဖို့ ဥပမာ- အဖြားတှဘောတှေ တကျတယျဆိုရငျ ဆေးရုံကို ခကျြခငျြးပွနျလာဖို့ အဲလိုမှာပွီးတော့ discharge လုပျလို့ရတယျ။ Positive တောငျမှ Symptom မရှိဘူး သကျသာတယျဆိုရငျ ပွနျလှတျတယျ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ စောငျ့ကွညျ့နိုငျတယျဆိုရငျ။ ဒီမှာက ကနြျောတို့ chloroquine သုံးတယျ။ ရောဂါက positive လညျးရှိတယျ။ X-ray ကလညျး ပွနတေယျ၊ symptom တှလေညျး ရှိတယျ အောကျဆီဂငျြ မြားမြားလိုတယျဆိုရငျ chloroquine နဲ့ ပွီးတယျ။ တခြို့ကတော့ chloroquine တောငျမလိုဘူး ၊ positiveဖွဈပမေယျ့ လူကောငျးနီးပါးရှိတယျဆိုရငျ ဒီအတိုငျးပဲ မှာလိုကျတာရှိတယျ။ တခြို့တော့ ဆေးရုံမှာ chloroquine နဲ့ ကုတယျ အမြိုးမြိုးပဲ ၊ ကိုယျခံအားပျေါလညျး မူတညျတယျ၊ အသကျအပျေါလညျး မူတညျတယျ။
အငျကွငျးနိုငျ။ ။ အဲဒီလို ငှကျဖြားဆေး chloroquine ကို လူနာတှကေို ပေးတဲ့နရောမှာ ဘယျလို အတိုငျးအတာ သတျမှတျပွီး ပေးလဲရှငျ့။
ဒေါကျတာ စိုးပိုငျ။ ။ အဓိက သတိထားရမှာက Heart ပဲ ၊ heart diseases ရှိတယျဆိုရငျ နညျးနညျး သတိထားရတယျ။ EKG လညျး နတေို့ငျးလိုလို check လုပျရတယျ။ Wave တှကွေညျ့ရတယျ ပွောငျးသှားလား ဆိုတာကွညျ့ရတယျ။ QT လို့ ချေါတယျ EKG မှာ Wave length လေးတခုရှိတယျ အဲဒါကို monitor လုပျရတာပေါ့နျော။ အဲဒါ တကျလာပွီဆိုရငျ ရပျပွီးတော့ နောကျတခုကို ပွောငျး ၊ အဓိကတော့ Heart monitor လုပျရတာပေါ့နျော။
အငျကွငျးနိုငျ။ ။ ဖလျောရီဒါမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျဖို့ လူတှအေိမျမှာပဲ နဖေို့ ညှနျကွားထားတဲ့ကာလ ဘယျလောကျထိလဲ။ အခုလို အမရေိကနျအစိုးရရဲ့ ဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျရေးအစီအစဉျတှကေရော လုံလောကျမှုရှိတယျလို့ မွငျပါလား။
ဒေါကျတာ စိုးပိုငျ။ ။ အခုအထိတော့ မပွောသေးဘူး ။ မလေလောကျအထိတော့ မှနျးထားတာပေါ့နျော။ Suggestion လောကျပါပဲ ဘာမှ တငျးတငျးကပျြကပျြမရှိဘူး၊ Curfew လိုမြိုးတော့မရှိဘူး သှားလာနတောပဲ။ လူအုပျတော့ မရှိတော့ဘူး မလိုအပျတဲ့ လူစုလူဝေးကတော့ အဲဒါတော့ ပေးမလုပျဘူး။ ဥပမာ- Church တှဘောတှေ မသှားရဘူး ၊ လူမလိုအပျပဲနဲ့ မစုရဘူး။ အဲလိုတော့ရှိတယျ ခှငျ့မပွုဘူး။
အငျကွငျးနိုငျ။ ။ အခုလို အစိုးရတို့ တာဝနျရှိသူတှဘေကျက ကာကှယျရေးအစီအစဉျတှေ လုပျနတောကရော လုံလောကျတယျလို့ မွငျပါသလား။
ဒေါကျတာ စိုးပိုငျ။ ။အခုအထိကတော့ patient rate တှကေတော့ တကျနတောပဲ၊ ကနျြော နတေို့ငျးသတငျးကွညျ့နတေဲ့အထဲမှာ positive case တှလေညျး တကျတကျလာနတောပဲ။ နညျးနညျးလေးတော့ အရငျပွီးခဲ့တဲ့ အပတျတှထေကျတော့ slowdown ဖွဈလာတယျလို့ ထငျတယျ။ အစိုးရလုပျတာကတော့ ပွောနတောကတော့ နောကျကတြယျလို့ ပွောနတေယျ ။ ဆိုတော့ ဖိဖိစညျးစညျး ဒါကို ကိုငျတှယျ တားဆီးတာ နညျးနညျးနောကျကတြယျ။”
Jackson Memorial ဆေးရုံက အထှထှေေ အထူးကု ဒေါကျတာစိုးပိုငျပွောသှားတာပါ။
ဒီအတောအတှငျးမှာပဲ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသှားတဲ့ မွနျမာ-အမရေိကနျ တခြို့ရှိနပေါတယျ။